Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Enyemaka Achọrọ maka United Airlines: Naanị ọgwụ mgbochi naanị!
Airlines • Aviation • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ajụjụ Ọnụ • News • Tourism • Transportation • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Iwu chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi nke United Airlines
United Airlines kwupụtara taa na ọ ga-achọ ka ndị ọrụ nweta ọgwụ mgbochi COVID-19 tupu Ọktoba 25, 2021, ma ọ bụ na ha nwere ike kwụsị.
United ghọrọ otu n'ime ọtụtụ ụlọ ọrụ na-etinye iwu n'oge na-adịbeghị anya na ndị ọrụ ha ga-enwerịrị ọgwụ mgbochi megide COVID-19.
Iwu a ọ kwadoro? Enwere ike ịchụ onye ọrụ n'ọrụ maka ịjụ irube isi?
Enwere ihe dị iche n'etiti ụgbọ elu na ụlọ ahịa na ụdị ọnọdụ ọrụ ndị ọzọ?
Keith Wilkes, onye ọrụ na onye ọrụ/onye na -eketa ọrụ na ụlọ ọrụ iwu mba nke Hall Estill, anọwo na -akpọ oku site na ụlọ ọrụ na -anwa inweta azịza nye ajụjụ gbasara iwu gbasara ma United, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla maka okwu ahụ, nwere ike nye iwu ọgwụ mgbochi ọrịa. ndị ọrụ.
Wilkes zara ụfọdụ ajụjụ dị mkpa nke ihe mere ọkwa United ji pụọ iche site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ mere ụdị ihe ahụ n'izu a.
"United Airlines kwupụtara taa na ọ na -esonye na ndepụta ụlọ ọrụ na -eto eto na -agwa ndị ọrụ ha ka ha nweta gbaa ọgwụ mgbochi maka COVID-19 ma ọ bụ a chụọ ha n'ọrụ. Nkwupụta United bụ akara ụgbọ elu mbụ US na -emejuputa ụdị iwu a maka ndị ọrụ 80,000 ya, ndị ga -enwe ruo ngwụcha Ọktoba inye ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ, na mwepu ole na ole, nkwụsị ihu, "Wilkes kwuru.
Nke a bụ ihe Wilkes nwere ikere na ajụjụ ọnụ:
Ajụjụ: Nnukwu nlekọta ahụike ndị ọzọ na-enye ndị were ọrụ, dị ka Google na Facebook, mere ọkwa yiri nke a n'izu a. Kedu ihe, ọ bụrụ ihe ọ bụla, dị mkpa gbasara United isonye n'usoro inye iwu maka ịgba ọgwụ mgbochi maka ndị ọrụ ya?
Wilkes: Na mgbakwunye na ịbụ onye mbụ na ụlọ ọrụ nke ọtụtụ nde mmadụ na ụlọ ọrụ dị na US na -adabere kwa ụbọchị, ndị ọrụ United - n'adịghị ka ụlọ ọrụ teknụzụ na ụlọ akụ - nwere ndị ọrụ otu. Site na nkwekọrịta nkwekọrịta mkpokọta ọnụ na iwu ọrụ gọọmenti etiti, ndị otu na -ahụtakarị na ha na -enweta nchekwa dị ukwuu megide iwu ọhụrụ nke ndị were ha n'ọrụ na -emetụta nke nwere ike imetụta ma ndị ọrụ ahụ hà na -arụ ọrụ ha.
Ajụjụ: Kedụ ka United ga -esi tinye iwu ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ọhụrụ na ndị ọrụ otu ya?